Vonona hiatrika ny fanadinam-pankana tokana ny CMR. - Madagascar Informations
Vonona hiatrika ny fanadinam-pankana tokana ny CMR.
28 octobre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Tsy misy ady eo amin’ny faculté de medecine sy ny Paramed ,ary vonona handray anjara amin’ny fanadinam-panjakana tokana ny Cercle de réflexion pour la revalorisation de la formation paramédicale izay fehezina amin’ny hoe CMR.
Tao anatiny taona vitsy niroborobo izay tsy izy ny fananganana sekoly ambony tsy miankina hanofana ho mpitsabo mpanampy izay anisany miteraka fihenan-danja ny lentany mpianatra ,vokany tsy milamina ny paik’ady hampiofanana ka mampisy fiatraikany eo amin’ny mpianatra.
Ny fanjakana anefa etsy andaniny mametraka ny hanatanterahina ny fandaharam-pampianarana tokana sy fanadinam-panjakana tokana izay mbola maro ny lesoka ka antony nananganana ny CMR izay vovonana natao hiara handinika sy hiaro ny fikambanambe ny mpitsabo mpanampy mba tsy ho anjorom-bala mikasika ny tontolony fahasalamana eto Madagasikara ,eo ihany koa ny maha vovonana natao hifandray amin’ny ministera mpiahy sy ny faculté de medecine ary ireo mpikambana ao anatiny.
Tsy miala ao anatiny rafitra napetrakiny fanjakana ny CMR saingy kosa mandrindra ny pitsopitsony. Vokany tsy misy ny fanoherana mikasika fanatanterahina ny programam-panjakana sy ny CMR. Tsy misy ihany koa ny fanilihana ireo mpiara mpisehatra na dia sarotra aza ny hampivondronana azy ireo raha ny nambarany filoha nationaly ny CMR Atoa Razanadrakoto Roland Albert. Noho izany tonga amin’izao fotoana izao ny fotoana hanatsarana ny tontolony fampiofanana paramedikaly eto Madagasikara.
Hisy ny fikaonandoham-pirenena ho tanterahina voalohan-dohany volana Dasambra ho avy izao ,fikaonan-doha natao handinihina ny mety sy ny tsy mety mikasika ny fandaharam-pampiofanana ho paramed. Maro ny mbola tsy mazava raha tsy hiresaka fotsiny ny lentany mari-pahaizana izay tsy ahafahana manomana mpiasa hiasa any ivelany.
← Dr Fidy Bariniaina manazava ny Homamiadan’ny nono
Visite des chantiers en cours au CCI et au Village de la Francophonie →
Un soutien financier pour le CFPF
13 mars 2017 Gasikara 0
Hiavaka ny andian’ny faha-10 (journées de l’emplois et de la Formation)